Wholesale Plastic Bottle Fekitori Mugadziri uye Mutengesi | Copak
Shanghai COPAK indasitiri kambani LTD ine anopfuura gumi ekugadzira mitsara yePET nePLA mabhodhoro. Iine yakasimba mhando manejimendi manejimendi uye yepamabasa hutano uye chengetedzo manejimendi sisitimu, kambani yedu yanga iriepurasitiki bhodhoro fekitori kwemakore mazhinji. Isu tinonyanya kugadzira makapu ePET, midziyo yekudya yePET, mabhodhoro ePET uye zvigadzirwa zvePLA.
COPAK yakaunza epamberi tekinoroji simba michina. Kune akawanda mashandiro anoita bronzing, otomatiki skrini yekudhinda muchina Kurongedza zvinoenderana nemishonga yekupakira zviyero kuona hutano uye kuchengetedzeka.
Se epurasitiki bhodhoro fekitori, COPAK yakaunganidza ruzivo rwakapfuma nemakore mazhinji ekugadzira.Tinonyatso kudzora mhando yechigadzirwa nekushandisa yesainzi manejimendi system. Iyo kambani inotenda kuti mhando yakanaka yechigadzirwa iropa idzva rekuchengetedza fekitori ichimhanya.
Kuchengeta kondirakiti nekuchengeta chikwereti kuzvipira kwedu kune vatengi zvachose. Hunhu hwakavimbika chigadzirwa mhando uye mushure-yekutengesa sevhisi ndedzedu zvinangwa zvinangwa. Tinotarisira kukura
pamwe nevatengi vekare kuti vakure pamwe nevatengi vatsva uye nemwoyo wese vagamuchire vatengi vekare uye vekare kuhwina kuhwina-kuhwina mamiriro uye kugadzira ramangwana rakajeka.
COPAK Packaging inodyara mumatekinoroji, vanhu uye maitiro anoendesa epurasitiki mapakeji mhinduro kune akasiyana maindasitiri. Kubva pane yedu nyowani lab iyo inoita kuti tikwanise kuvaka uye kuyedza nyowani mapakeji nekukurumidza kune matsva ekugadzira mapuratifomu ayo anowedzera zvigadzirwa zvedu 'kusvika uye huwandu, hunyanzvi huri pakati pezvose zvatinoita. Isu tave kugona pakatiepurasitiki mabhodhoro mafekitori.
Hunhu hwakanyanya kukoshesa pakopak epurasitiki bhodhoro fekitori. Chikwata chedu chakakumikidzwa kuve nechokwadi chekuti mutengi wese anogamuchira mhando yekurongedza zvigadzirwa zvavo zvinoda uye zvinokodzera. Kubva pamatanho edu nemaitiro edu einjiniya nekugadzira, isu takaisa macheki mazhinji uye zviyero munzvimbo kuona kuti bhodhoro rega roga rinogadzirwa nemhando yepamusoro soro.
Pashure: PET Plastic Midziyo ine Lids
Zvadaro: Plastiki Juice Mabhodhoro
yakagadzirirwa mabhodhoro ePET